WAA URUR KA DHISAN LAGANA AASAASAY MAGAALADA OSLO EE AH CAASIMADDA DALKA NORWAY. WAXAA XUBNO KA AH AASAASAYNA DHAMMAAN NOOCYADA KALA DUWAN EE AY BULSHADU KA KOOBAN TAHAY. WAXQABADKIISA & UJEEDOOYINKIISANA HOOS AYAAD KA AQRISAN KARTAAN !
(Somslisk Velvilje Organisasjon)
Postboks 9053 Grønland
0133 Oslo Norway
Waxaad halkan kala socon doontaan wixii ogeysiis ah ee ku socda xubnaha ururka samadoon.
Haddaad doonayso inaad xunin ka noqoto ururka Samadoon, iyo haddii aad doonayso inaad wax inagu soo kordhiso, ha ahaato aqoon, talo & tusaalayn fiican, iyo wax kaleba nagala soo xiriir halkan: samadoon@samadoon.com
NINKA DAMAC KA GALAYEE
AMA DUUL KU YIMIDOOW
ADIGAA KU DAALIYEE
SOOMAALI LAMA DAGO
MA DOORSOONTO DHAQANKEED !!!
MIDABKAAGA KAAN RABIN, NINKAAN RABIN
MUUQAAGA KII NECEB
KIISANA HA MEEL MARIN !!!
DAA'IMOOW ALLAHAYOOW - ADAA HAYA DEEQDEE - XIDDIGTAA DUSHAYDEE -
DACALLADA SHAN GEESTEE - ISTICMAARKU KALA DILAY !
DIB HAYSUGU URURTOO - DALKAYAGA DHAMMAANTII - SOOMAALI DUL AHAAN -
HAYSKU DUUBANTOO - DOOBI QURA HA LAGA CABO !!! ABWAAN FAYSAL
Waa heestii ay ardada dugsiga sare ee RAAGE UGAAS kaga qayb gashay tartankii fanka ee ardada dugsiyada sare ee Xamar sanadkii 1983, halkaasoo ay fiinaalihii kula kulmeen ardada dugsiga sare ee SH. Xasan Barsame.
RADIO SAMADOON ! Waa raadiye usbuucle ah oo ku hadla afka soomaaliga, kaasoo ka soo baxa caasimadda dalka Norway ee Oslo. Waxaa uu soo galaa habeen walba oo Axad ah, saacadda dalka Norway goortay tahay 9-ka fiidnimo illaa 12-ka saqda dhexe, ama 21:00 - 24:00
Dadka deggen Oslo iyo agagaarkeeda waxaa ay kala socon karan mawjadda FM 99.3. Isla markaasna si toosa ayaa waxaa naloogaga dhagaysan kartaan qadka internetka, idinkoo riixaya halkan. radio samadoon.
Ciddii ay dhaaftana dib ayay uga dhagaysan kartaa halkan barnaamijka oo dhan.
Ciddii doonaysa inay qoraal inoo soo gudbiso waxaa ay inoogu soo diri karaan :
E-mail: Radio@samadoon.com ama 00-47-97461960
Xilligga aanu shaqada ku jirnana waxaa nalaga soo wici karaa taleefanka: 00-47-21 41 0 993
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 30/10-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 16/10-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 09/10-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 25/9-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 18/9-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 14/8-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 07/8-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 31/7-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 24/7-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 17/7-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 10/7-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 03/7-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 19/6-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 29/5-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 22/5-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 15/5-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 1/5-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 24/4-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 17/4-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 10/4-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 20/3-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 13/3-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 27/2-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 20/2-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 13/2-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 06/2-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 30/1-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 16/1-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 9/1-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 2/1-2011. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 26/12-2010. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 19/12-2010. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 12/12-2010. Riix Halkan
Halkan waxaad ka dhagaysan kartaan barnaamijkii baxay Axaddii ay taariikhdu ahayd 05/12-2010.
QAAR KA MID AH SHAQAALAHA RADIO SAMADOON :
WAXAA KA HAWL GALA WARIYEYAAL AQOON U LEH SAXAAFADDA OO HORE UGA SOO SHAQEEYAY WARBAAHIYEYAAL, IYO SAXAAFADO KALA DUWAN.
HALKAN KA DAAWO MUUQAALKA WARAYSIYADII RADIO SAMADOON QAAR KA MID AH :
RADIO SAMADOON 12 / 12 - 2010 :
Waxaanu ku soo qori doonnaa barnaamijyada aanu hawada idiin soo marin doonna usbuucan, haddii ilaah ka raali noqdo.
21:00 Ayaanu soo galaynaa hawada.
00:00 Hawada ayaanu ka baxaynaa !!! RADIO SAMADOON :
WAXAAD HALKAN KALA SOCON DOONTAAN OO AAD KA DHAGAYSAN KARTAAN BARNAAMIJYADII HORE UGA BAXAY RADIO SAMADOON:
webmaster@samadoon.com .......... copyright&copysamadoon.com2011